अध्याय ४० | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
तँ किन सुस्त छस्? तँ किन अचेत छस्? धेरै चेतावनीहरूले तिमीहरूलाई जगाउन सकेको छैन अनि यो मलाई दुःखित तुल्याउने कुरा हो। मसित साँच्चै मेरा छोराहरूलाई यस्तो अवस्थामा हेर्ने इच्‍छा छैन। कसरी मेरो हृदयले यसलाई सहन सक्छ? ओहो! मैले तिमीहरूलाई मेरो आफ्नै हातले सिकाउनु परेको छ! मेरो गति निरन्तर तीव्र हुन्छ। मेरा छोराहरू! छिट्टै उठ अनि मसित सहकार्य गर। कसले मेरो निम्ति इमानदारी रूपमा आफैलाई अहिले समर्पित गर्छ? कसले एउटै शब्द गुनासो नगरीकन आफैलाई पूर्ण रूपले समर्पण गर्न सक्छ? तिमीहरू सधैँ अचेत र बुद्धू छौ! तिमीहरूमध्ये कति जनाले मेरा भावनाहरूलाई ध्यान दिन सक्छौ अनि कसले मेरा वचनहरूको आत्मालाई साँच्चिकै राम्रोसित बुझ्न सक्छौ? मैले गर्न सक्ने कुरा भनेको व्याकुल भएर पर्खनु र आशा गर्नु मात्र हो; तिमीहरूको हरेक चालले मेरो हृदयलाई सन्तुष्ट पार्न नसकेको देखेर म के नै भन्न सक्छु र? मेरा छोराहरू! तिमीहरूका पिताले आज गर्नुहुने हरेक कुरा उहाँका छोराहरूका निम्ति हो। किन मेरा छोराहरूले कहिल्यै पनि मेरो हृदयलाई बुझ्दैनन्, अनि किन मेरा छोराहरूले सधैँ मलाई, तिमीहरूका पितालाई, चिन्तित तुल्याउँछन्? कहिले मेरो छोराहरू बढ्नेछन्, मलाई चिन्तित नतुल्याउने हुनेछन्, अनि तिनीहरूको बारेमा मलाई ढुक्‍क हुन दिनेछन्? कहिले मेरा छोराहरूले स्वाधीन भएर जिउन सक्नेछन्, खडा हुन सक्नेछन् अनि तिनीहरूका पिताको काँधमा भएको बोझलाई हल्का पार्न सक्नेछन्? म चुपचाप मेरा छोराहरूको निम्ति आँशु बगाउँछु, अनि मेरा छोराहरू, मेरा प्रियहरूलाई मुक्त गर्न मेरो सबै कुरा परमेश्‍वरको व्यवस्थापनको योजनाभित्र राख्छु। मसित अर्को कुनै विकल्‍प छैन।
मेरा प्रतिज्ञाहरू पूरा हुन आएका छन् अनि तिमीहरूका आँखाको सामु प्रकट भएका छन्। किन तिमीहरू मेरो हृदयलाई ध्यान दिन सक्दैनौ? किन? किन? अहिलेको क्षणसम्म, के तैँले गणना गरेको छस्: मेरो हृदयलाई सन्तुष्ट पार्ने कति वटा कुराहरू तैँले गरेको छस् अनि मेरो मण्डलीलाई पोषित तुल्याउने र खुवाउने कति वटा कुराहरू तैँले गरेको छस्? यसलाई ध्यानपूर्वक विचार गर्; लापरवाही नगर्। सत्यताको एउटै अंशलाई पनि हातबाट जान नदे। तैँले बाहिरी रूपहरूमाथि ध्यान केन्द्रित गरेर सारलाई चाहिँ बेवास्ता गर्नु हुँदैन। सबै समयमा, तेरो हरेक वचन र क्रिया अनि तेरो हरेक चाल ख्रीष्टको आसनसामु न्यायबाट भएर गएको छ कि छैन अनि तँ नयाँ व्यक्तिको स्वरूपमा रूपान्तरण भएको छस् कि छैनस् भनी तैँले जाँच्नुपर्छ—अनुकरण गरेर होइन तर जीवनको अभिव्यक्ति सहित भित्र गहिराइबाट उत्पन्न भएको हुनुपर्छ। तेरो जीवनमा ढिलाइ नगर्, ताकि तँ हानि भोग्नदेखि बच्न सक्। हतार गरेर यस अवस्थालाई समाधान गर्, मेरो हृदयलाई सन्तुष्ट गर्, अनि चाल-ढङ्गका सिद्धान्तहरूलाई ध्यान दे: धार्मिकता र सोझोपनको कुराहरू गर्, अनि मेरो हृदयलाई सन्तुष्ट गर्। हडबडे नहो। के तँ यस कुरालाई सम्झन सक्छस्?
अघिल्लो: अध्याय ३९
अर्को: अध्याय ४१